Xinhua Myanmar - ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရုရှားက အမေရိကန်အား “ မီးနှင့်ဆော့ကစားခြင်းမပြုရန်” ပြောကြား
မော်စကိုမြို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောရုရှားလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Eastern Europe
အွန်လိုင်းပေါ်မှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ကြေညာချက်တွင် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကို ကြောင်းကျိုးမရှိမိုက်မဲမှုအောက်တွင် “ ရုရှားဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ရန်လိုသောအပြုအမူတစ်ခု” ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
“ဒါက ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပြည်တွင်း ပြဿနာတွေပါ ၊ အိမ်ဖြူတော်က ပြည်ပရန်တစ်ခုအနေနဲ့ ပုံဖော်ဖို့ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေတယ်၊ အမေရိကန်ရဲ့ မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ထပ်တလဲလဲပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒါက ယုတ္တိမရှိသလိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို ပိုလို့ပိုလို့ ဆိုးရွားစေရုံမျှသာ တစ်ခုပဲဖြစ်မှာပါ ” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဝန်ကြီးဌာနက ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပေါ်အခြေခံပြီး တုံ့ပြန်မှုလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၎င်း၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများကို ခုခံကာကွယ်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ရုရှားတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက မရှိတော့သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဓါတုလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် စစ်လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး နှင့် နျူကလီးယားလက်နက် မပြန့်ပွားရေး နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီမှုများနှင့် စာချုပ်များကို တောက်လျှောက်ချိုးဖောက်သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ရာ အခြားသူများအား ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြောရင်း အစဉ်တစ်စိုက် လက်ညှိုးထိုးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။(Xinhua)
MOSCOW, March2(Xinhua) -- The Russian Foreign Ministry urged the U.S. administration "not to play with fire" after Washington on Tuesday announced sanctions against Russian individuals and entities over the alleged poisoning of Kremlin critic Alexei Navalny.
The United States has been deprived of the moral right to lecture others since it isaserial violator of international treaties and agreements in the field of arms control and non-proliferation, it said. Enditem
Photo - Russian security guards in Moscow
Previous Article ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့တော်တွင် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ တစ်သန်း ထိရောက်ရှိလာ
Next Article ရုရှားမဟာဗျူဟာမြောက်ဒုံးကျည်တပ်ဖွဲ့က ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း လေ့ကျင့်မှုပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ပြုလုပ်မည်ဟု ဆို